HETSIKA FAMPANDRIANA FAHALEMANA : Miaramila miisa 34 naiditra am-ponja vonjimaika
Hentitra ny fitondram-panjakana amin’ny fiadiana ny kolikoly na koa ny baranahany izay nampivarina an-kady ny Firenena hatramin’izay. 12 juin 2019
Misongadina tokoa tato ho ato ny ady amin’ny kiantranoantrano, izay fomba ratsy nentina nanaronana ny hadisoan’ny hafa mandika ny lalàna mifehy. Manamarika izany ny fanadiovana eo anivon’ny mpitandro filaminana mandritra ny fanatanterahana ny hetsika fampandriana fahalemana manerana ny Nosy. Mahazo ny sazy tandrify azy avokoa ireo izay tratra manao ny tsy mety.
Miaramila miisa 34 amin’izao fotoana izao no tafiditra am-ponja vonjimaika raha toa ka voalaza fa tsy nanaja ny fepetra napetraky ny Etamazaoro Jeneralin’ny Tafika Malagasy. Henjana ny fanaraha-maso akaiky eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena amin’ireo miaramila ao anatin’ ny Tafika Malagasy satria natao ho modely sy hitondra filaminana no antom-pisian’izy ireo raha ny fanazavana voaray hatrany.
Araka ny fanampim-panazavana voaray mahakasika ireo tafiditra am-ponja ireo dia miaramila miisa telo avy any amin’ny Distrikan’Isandra no sarona vokatry ny fanolanan-jaza, telo hafa tao Beravina Maintirano izay voarohirohy tamin’ny fandrahonana sivily sy fanapoahana basy tsy nahazoana alalana no sady mamo toaka, iray hafa tany Morondava ary koa miaramila miisa 27 voarohirohy tamin’ny resaka vono olona telo lahy tao Ampitatafika Antanifotsy.
Ireo ambiny kosa dia miaramila avy amin’ny Rfi eny Ivato avokoa, izay nahitana manam-boninahitra nanatanteraka fampandrian-tany tao Ambohimahasoa ary koa tompon’antoka tamin’ny fisamborana ireo olona telo hita faty tao anaty rano nolazaina fa dahalo. Nandritra ny fitohizan’ny famotorana momba ny raharaha no nahafantarana fa misy tamin’ireo miaramila no nandray anjara mivantana tamin’ny famonoana ireo telo lahy, nisy kosa ireo mpiray tsikombakomba. Manamafy hatrany ny eo anivon’ny Minisiteran’ny fiarovam-pirenena fa tsy hitsitsitsitsy intsony amin’ireo izay minia mandika lalàna. Natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro filaminana fa tsy mpamboly korontana velively akory.